Wararka - FIA ku salaysan COVID-19
Soosaarka Asiidhka Nukliyeerka
Falanqeeyaha soo saarista
Soo saarista Reagent
Baaritaanka Molecular Diagnostics
POCT ee caafimaadka xoolaha
FIA ku salaysan COVID-19
COVID19 Ag- Baaritaanka COVID19 antigen wuxuu si toos ah u ogaan karaa in muunada bini'aadamka uu ku jiro COVID19 iyo in kale.Cilad-sheegashadu waa dhakhso, sax ah, waxayna u baahan tahay qalab iyo shaqaale hooseeya. Waxa loo isticmaali karaa baadhis hore iyo ogaanshaha hore, oo ku habboon baadhista baaxadda leh ee cisbitaalada aasaasiga ah, natiijadana waxa lagu heli karaa 15 daqiiqo gudahood sida ugu dhakhsaha badan.
COVID19 Nab- Si kiliinik ah ayaa loogu isticmaalay qiimaynta kaaliyaha ee saamaynta tallaalka COVID19 iyo qiimaynta unugyada ka-hortagga ka-hortagga ee bukaannada bogsaday caabuqa ka dib.
Ferritin- Heerarka serum ferritin waxaa la ogaaday inay si dhow ula xiriiraan darnaanta COVID-19.
D-Dimer-D-Dimer wuxuu si aad ah ugu kordhaa bukaanada ugu daran ee COVID-19, oo leh xanuuno xinjiro badan ah iyo samaynta microthrombotic ee xididada dhiiga ee xuubka xuubka.
Bukaannada daran ee qaba sambabada wadnaha ee cusub waxay si dhakhso ah u yeelan karaan xanuunka neef-mareenka dhibka neefsiga, shoogga septic, ay adagtahay in la saxo dheef-shiid kiimikaad acidosis, xinjirowga dhiigga, iyo xubno badan oo hawlgab ah.D-dimer ayaa sare u qaaday bukaanada qaba oof wareen daran.
Heerarka CRP-CRP ayaa kordha inta badan bukaanada COVID-19. Bukaanjiifka cusub ee qaba sambabada halbowlaha badankoodu waxay sare u qaadeen borotiinka C-reactive (CRP) iyo heerka sedimentation erythrocyte, iyo procalcitonin caadiga ah;Bukaannada daran iyo kuwa halista ah waxay badanaa leeyihiin arrimo caabuq ah oo sarreeya.
IL-6- Kor u qaadista IL-6 waxay si weyn ula xiriirtaa muuqaalada bukaanada qaba COVID-19 daran.Hoos u dhigista IL-6 waxay si dhow ula xiriirtaa waxtarka daaweynta. iyo kororka IL-6 wuxuu muujinayaa sii xumeynta cudurka
Heerka PCT- PCT waa mid caadi u ah bukaanada COVID-19, laakiin wuu kordhaa marka uu jiro caabuqa baytariyada.PCT waxay aad ugu nugul tahay ogaanshaha iyo aqoonsiga caabuqyada bakteeriyada habaysan, saamaynta daawaynta iyo saadaasha marka loo eego borotiinka C-reactive (CRP) iyo arrimo kala duwan oo jawaab-celin barar ah (bacterial endotoxin, TNF-a, IL-2), waana qiime caafimaad oo waxtar leh. .
SAA-SAA waxay door gaar ah ka ciyaartay ogaanshaha hore ee COVID19, kala soocida darnaanta caabuqa, horumarka cudurka, iyo qiimaynta natiijada.Bukaannada qaba sambabada wadnaha ee cusub, heerka serum SAA ayaa si aad ah u kordhi doona, iyo marka uu cudurku sii bato, kororka SAA weyn.
Waqtiga boostada: Nov-12-2021
Cutubka G25 Waterfront Studios, 1 Dock Road, London, Boqortooyada Ingiriiska, E161AH
© Xuquuqda daabacaadda 20102021 Aehealth Limited : Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin